नेपाल आज | बाबुराम र उपेन्द्र संविधानबिरुद्धको अभियानमा, अन्ततः नेकपामा मिसिने (भिडियोसहित)
बाबुराम र उपेन्द्र संविधानबिरुद्धको अभियानमा, अन्ततः नेकपामा मिसिने (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपाललाई संविधानबिरुद्धको गठवन्धनकारुपमा ब्याख्या गर्न थालिएको छ । अहिले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र रुपमा भैरहेकाबेला नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको मिलनलाई संविधान विरोधी शक्ति निर्माणको पहलका रुपमा लिइएको छ ।
लामो समय तत्कालिन नेकपा माओवादी र नयाँ शक्ति पार्टीमा रही डा. बाबुराम भट्टराईसंग निकट सम्बन्धमा रही काम गरेका नेता खिमलाल देवकोटाका अनुसार नवगठित पार्टीको संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय परिषद्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवै यो संविधानसंग सन्तुष्ट छैनन् ।
संविधान जारी गर्ने बेला र संविधान जारी भैसकेपछि यताका उनीहरुका गतिविधि र अभिव्यक्तिले यो कुरा स्पष्ट गरेको छ । मुलुकमा संविधान विरोधी र संविधान पक्षधरहरुको ध्रुवीकरण भैरहेकाबेला विरोधी कित्ताको नेतृत्व भट्टराई र यादवले गर्न लागेको उनको विश्लेषण छ ।
उनी भन्छन््, ‘ संविधानप्रति असहमत राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र उज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील पार्टी समाजवादी पार्टीमा मिसिने तयारीमा छन् । उनीहरुबीच लगातार वार्ता भैरहेको छ ।’
‘खासगरी नेपालको संविधानप्रति छिमेकी भारत सन्तुष्ट नभएको र यसैकारण लामो नाकावन्दी भोग्नु परेको तथ्य सबैलाई थाहै छ । १२ बुँदे समझदारी र त्यस यताका परिवर्तन मन नपाउने तत्वहरु पनि प्रशस्त छन् । अहिले आएर यी सबै शक्ति एकजुट हुँदैछन् । नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपाललाई यो अभियानमा दक्षिणको छिमेकीको समर्थन र सहयोग छ भन्न सकिन्छ । ’ देवकोटा बताउँछन् ।
उपेन्द्र यादवको मधेश मुक्ति र डा. भट्टराईको वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियान भने समाप्त भएको छ । दुवै जना आ–आफना एजेण्डा बिसाएर नयाँ मिसनमा लागेका हुन् । अहिले जे जस्तो मिसन बोकेपनि दुवै जना अन्ततः नेकपामा समाहित हुने देवाकोटाको तर्क छ ।
मुलुकमा अब २ मात्र पार्टी
मुलुकमा अन्तिममा दुईवटा राजनीतिक शक्ति ( बामपन्थी र प्रजातान्त्रिक) मात्र रहने भएकाले बाबुराम र यादवको समूह नेकपामा मिसिने अवस्था आउने उनी बताउँछन् । यसमा कम्युनिष्ट बिचारधार छोडेको भन्ने बाबुरामलाई फर्किन कुनै समस्या हुनेछैन । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीलाई पनि पार्टीमा स्वागत गर्न कुनै विधि, विधान, सिद्धान्त र दर्शनले छेक्ने छैन । वृहत पार्टी निर्माणमा यो सहयोग नै हुनेछ ।
राजपा लगायतका शक्तिहरु भने कांग्रेसमा मिसिने देवकोटाको दावी छ । जहाँसम्म जनयुद्ध गरेका नेताहरुले आ–आफनो पार्टी विलय गराए भन्ने तर्क छ, त्यो वाहियात भएको देवकोटा बताउँछन् । प्रचण्ड र बाबुराम दुवै क्षमतावान भएपनि भोलिका दिनमा त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, उनीहरु पनि नेता रहने छैनन्, अर्कोले स्वभाविकरुपमा ठाउँ लिन्छ ।
‘मेरो सरकार’ भन्नु गम्भीर त्रुटी
संविधान र कानुनका ज्ञाता समेत रहेका नेता देवकोटाका अनुसार राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु त्रुटीपूर्ण छ । यो संविधान र कानुनसंग मेल खाँदैन ।
देवकोट भन्छन्, ‘ अझ प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार भनेर जो भारत र बेलायत देखाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो त झन मिल्दै मिल्दैन । ’
राजनीतिक दल, सांसद् र सर्वसाधारणले पनि राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको शब्दमा भन्दा पनि नीति कार्यक्रममो अन्तर्यमा केन्द्रीत हुनुपर्ने देवकोटाको सुझाव छ ।